DAAWO:Puntland iyo Soomaaliland oo ciidamo Dagaal soo dhoobay Gobolka Sool. – Xeernews24
DAAWO:Puntland iyo Soomaaliland oo ciidamo Dagaal soo dhoobay Gobolka Sool.
19. August 2017 /in VIDEO/AUDIO /von admin
Iyadoo dhawaan ay Puntland iyo Soomaaliland warbaahinta isku mariyeen eedeymo midba midka kale ku eedeynayo inuu kusoo xadbay xuduudkiisa ayaa waxaa soo ifbaxaya Diyaar garow ay labada dhinac sameynayaan.
Wasiirka Maaliyadda Puntland C,laahi Siciid Carshe Dhaqaaje ayaa booqasho dheeri galin ah ku tagay Saldhigyo ay Ciidamada Puntland ee Difaaca Xuduudaha ay ka sameysteen deegaano ka tirsan Gobolka Sool.
Soomaaliland oo gacanta ku haysa Caasimadda Sool ee laascaano iyo inta badan Gobolka waxey dhankeeda Fiijignaan galisay Ciidamadeeda jooga Gobolka Sool.
DAAWO MUQAALKA CIIDAMADA
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/08/large-5.jpeg 525 952 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-08-19 17:14:502017-08-19 17:14:50DAAWO:Puntland iyo Soomaaliland oo ciidamo Dagaal soo dhoobay Gobolka Sool.
Waa kuma ninka keliya ee Farmaajo iyo Khayre ka sareeya ? Wasiir Faratoon oo Maamulka Hargeysa ka Tirsan ayaa tira koobay dhiigta sha...